Bayavutha abasebenzi bakaMasipala waseNewcstle | Eyethu News
Noon deadline looms for defiant Mugabe as Zimbabwe crisis deepens - 60 mins ago
Bayavutha abasebenzi bakaMasipala waseNewcstle
“Ngeke sikumele ukubanjwa kwezimali kumabhonasi ethu ngoba sikweleta umasipala.”
Ophethe umbhobho usihlalo weSAMWU lapha eNewcastle uMnuz Nhlanhla ‘China’ Ngwenya ehola isiteleka sabasebezni bakamasipala
Abasebenzi bakamasipala waseNewcastle bathi zizolutheza olunenkume izikhulu zalomasipala ezisolwa abasebenzi ngokuthi ziyazitamuzela nje emiholweni yabo, ngenxa yokuthi abasebezni bakweleda amarates.
Kuthe ngoLwesihlanu labasebenzi banqume ukungena emgwaqeni beholwa yinyunyana yabo iSouth African Municipality Workers Union (Samwu), bonke bekhomba lomkhandlu ngokudla amandla abo.
Futhi labasebenzi bavumelane ngezwi elilodwa lokuthi umkhandlu awume ukuzihhumbulela nje emiholweni yabo, kodwa akube nezingxoxo ngaphambi kokuthatha imali yabo.
Obehola lemashi uSihlalo wayo lenyunyana lapha eNewcastle uMnuz Nhlanhla ‘Chine’ Ngwenya.
“Sithi ngeke sikubekezelele ukuthi akuxetshulwe nje emabhonasini ethu ngenxa nje yokuthi sikweleda umasipala imali yamarates. Futhi umasipala kaxoxi nomsebenzi bavumelani ukuthi malini angayidonsa, kodwa yena uvele adonse nje imali efunwa uyena,” kuchaza uNgwenya.
Nakuba lemashi bekungeyama-rates kulomasipala, kodwa kugcine sekungena nokunye abasebenzi abathi nakho kuyahlupha. Phakathi kwezinto ezingenile ukuqashwa kwezintombi zezinye izikhulu kulomkhandlu kanye nokunikezelwa kwabathile ngamathenda.
Labasebenzi bathi lokhu akupheze, kungenjalo zonke izikhulu eziqhuba lomkhuba ziwukhomba umuzi onotshwa;l Iphunzile imziamo yokuthola umenenja walomkhandlu uMnuz Bhekani Mswane, uciungo lwkho belumpngoloza lodwa lungabanjwa muntu.
Sifuna imali yethu manje – Abasebenzi bakamasipala